कुन राशिको लागि आजको दिन कति शुभ ? – हेर्नुहोस् ज्येष्ठ २ गतेको राशिफल « Dhankuta Khabar
आज श्री शाके १९४१ बि.स. २०७६ साल ज्येष्ठ २ गते बिहीबार इश्वी सन् २०१९ मे १६ तारीख वैशाख शुक्लपक्ष द्वादशी तिथी ७ः३१ बजे सम्म पश्चात त्रयोदशी तिथी चित्रा नक्षत्र सिद्धि योग कौलव करण चन्द्रमा कन्या राशिमा १६ः३९ बजे सम्म पश्चात तुला राशिमा आनन्दादि योगमा चर योग सुर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु प्रदोष व्रत, कोका कौशिकी संगममा मत्स्यदर्शन गर्ने सांस्कृतिक दिवस – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे / धनकुटा खबर
भाग्योदयका निम्ती मित्रजनको साथ सहयोग आवश्यक रहनेछ । मध्यान पश्चात भने जिवन साथीको साथ सहयोग द्वारा ब्यापार ब्यवसायका माध्यम बाट आम्दानीका श्रोत सुदृण बन्नेछ । सभा सम्मेलन जन्य कार्य सहभागीता मिल्नेछ ।
नजिकका ब्यक्ति बाट बिश्वासघात हुन सक्छ । तात्कालिक खर्चका कारण सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ला । नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशमा कमि आउनेछ । सन्तान सम्बन्धि समस्याले सताउने छ ।
निर्णय गर्ने क्षमता मा बृद्धि हुने योग रहेको छ । पारीवरिक साथ सहयोग प््राप्त रहनेछ । सामान्य कार्यको निम्ती धेरै समय ब्यतित हुनाले मानसीक तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ । आम्दानि क्षेत्र राम्रो रहनेछ ।